FANADIOVANA VONJY TAVANANDRO : Tonga vahiny vao mifafa trano ny HVM ao Antsiranana
Fokontany 20 tamin’ny 25 no fantatra fa nanatanterahan’ireo avy amin’ny antoko Hvm fanadiovana faobe taty Antsiranana. 10 août 2018
Tsiahivina fa aty an-toerana no hanaovana ny fihaonamben’ ny Hvm anio zoma, sy rahampitso sabotsy 11 aogositra. Araka izany dia hita fa manakaiky ny fihaonana na koa tonga vahiny vao mifafa trano. Fantatra fa anisany hiatrika io fihaonan’ny Hvm io ny filoha mpamorona ny antoko. Tsy ny fanadiovana io ihany no koropahin’ireo Hvm fa tsy vitsy ny hetsika fanangolena vahoaka.
Nahoana no tsy notanterahina ireo rehetra ireo ela jiaby izay fa antomotra fifidianana vao miraparapa sy mikoropaka manatona vahoaka ? Raha tao amin’ny fokontany Tanambao avaratra no resahina dia manakaiky ny moske Chadouli sy nanadio ny tao anaty tokotanin’ity toeram-pivavahana ireo mpanohana Hvm vitsy an’isa. Efa fantatry ny mpitazana fa fakana ny fon’ireo mpino silamo izao fihetsika ataon’ny Hvm izao.
Ankoatra izany nodiovin’izy ireo koa tao amin’ny tsena mitafo na dia efa fomba mahazatra ireo mpivarotra aza ny manadio isaky ny maraina alohan’ny hivarotra. Mandeha koa ny fametahana sorabaventy ataon’ireo lohandohan’ny mpisorona ao amin’ity antoko ity. Tahaka izany ihany koa ny tao an-Tanambao Atsimo, teo amin’ny zaridaina Kailah no nodiovina, nokapaina avokoa ireo bozaka. Araka ny voalaza dia nokaramaina 5000 Ariary tsirairay ny olona nanadio.
Raha ny fahitana ny fandraisana andraikitra tamin’ity fanadiovana nataon’ny Hvm ity no resahina dia marefo dia marefo ny hetsika misy. Voalaza fa noho ny fizarazarana eo amin’ny samy izy ireo no sady fankahalana ny mpitarika tia sehoseho ny antony. Fantatra hatrany fa tsy ialan’ny ady an-trano matetika ny ao anatin’ny antoko Hvm. Samy te hitady voninahitra sy lazaina fa tena mahavita azy avy ireo lohandohany ka miafara amin’ny fisaratsarahana. Raha ny Hvm aty Antsiranana no asian-teny dia tsy manaitra ny maro, fa fitsimponana ny avy amin’ ny kaominina ambanivohitra no raofina mameno laharana.